Istanislev Petroov, namichi addunyaa waraana niwukileeraa jalaa baraare waggaa 77tti boqote - BBC News Afaan Oromoo
Istanislev Petroov, namichi addunyaa waraana niwukileeraa jalaa baraare waggaa 77tti boqote
Goodayyaa suuraa Istanislev Petroov, Namicha addunyaa waraana Niwukileeraa jalaa baraare
Qondaala raayyaa waraanaa Soviyeet kan ture Istanislev Petroov, bara addunyaan waraana qabbanaawaa keessa turtetti, badii niwukileraan qaqqabuuf ture hambisuudhaan yaadatama. Namni kun umurii waggaa 77tti du'aan boqote.
Bara 1983 wayita koompitaarri akka waan Ameerikaan gara Ruusiyaatti niwulkileera dhukkaaftee ergaa dogoggoraa himetti, Istanislev Petroov giddugala dhaabbata niwukileeraa Rusiyyaatti qondaala akeekkachiisa dursaa ture.
Gabaasa komputarri erge sana gabaasa sobaati jechuun, murtee mataa isaatiin gara qaama olaanatti utuu hin dabarsin hafe.
Gara boodanaa ifa kan bahe tarkaanfiin isaa kun, waraana niwukileeraa silaa uumamuu malu hambiseera jedhama.
Petroov kan inni du'e mana isaa Mooskootti argamuu keessatti ji'a Eebla keessa yoo ta'u, du'i isaa kan ifa bahe garuu dhiyeenya.
Gaaffiif deebi bara 2013 BBC waliin taasiseen, Fulbaana 26, bara 1983 ganama, odeeffannoo kompitaraa misaa'elli baay'een Ameerikaa irraa gara Ruusiyaatti qajeelaa akka jiru himu akkamitti akka arge dubbateera.
''Haleellaan misaayilaa gaggeeffama akka jiru beeksiisuuf odeeffannoo guutuun of harkaa qaba ture. Utuun gabaasakoo angawoota na gararraa jiraniif dabarseera ta'ee, namni gabaasa kootiin mormu tokko ille hin jiraatu ture,'' jedha Petroov.
''Kan ana irra eegamu bilbila fuudhee kallatiidhaan gara ajajoota waraanaa olaanootti bilbiluu qofa ture - garu kana gochuu hin dandeenye. Waanan eelee ho'aa irra taa'e jiru fakkaate natti dhagaahame.''
Akkaataan leenjii Petroov waan akkanaa battaluma sanaatti gabaasuuf isa dirqisiisa ture. Inni garuu gara waajjira waraanaa olaanaatti bilbiluu dhiisee qondaala hojii irra ture tokkotti sirna koompitara isaa rakkoon akka mudate gabaase.
Goodayyaa suuraa Biyyi Sooviyeet durii fi Ameerikaan meeeshaa niwukileeraatiin walitti dhaadatu turan
Utuu dogoggoreera ta'e, daqiiqoota muraasa keessatti dhohiinsi niwukileeraa Soviyeet mudata ture.
''Daqiiqaa 23 booda ture akka homtuu hin ta'in kanan hubadhe. Akka haleellaan hin jiraatiin baruunkoo anaaf boqonnaa gudda ture,''
Qorannaa booda irra taasifameen, saatalaayitiin Raashiyaa ifa aduu dummessa irraa calaqqisu akka furguuggee misaa'elaatti dogogoraan fudhachuu irra kan ka'e ta'uun isaa bira gahame.
Petroov, dhuma irratti sadarkaa Leetinant Koloneelaatiin kan sooroma bahe wayita ta'u, Eebla 19, 2017 keessa lubbuun isaa dabarte. Du'uun isaa garuu ifa kan ta'e ji'a Fulbaana kana keessa bilbila akka tasaa mana isaatti bilbilameen ture.
Seenaa Petroov jalqaba adduunyaatti kan beeksise, lammiin Jarmanii fi qopheessaan fiilmii Kaarl Ischumaacher Fuulbaana 7 baga guuyyaa dhaloota keetiin si gahe jechuuf wayita bilbileefitti, ilmi Petroov Dimitriin bilbila kaasee akka inni booqote itti hime.
Kaarl Ischumaacher du'uu Petroov marsariitii irratti labsuu isaarraa kan ka'e, miidiyaaleen addaa addaas oduu kana argachuu danda'an.